Pumpkin | January 2020
Siyaabaha loo xakameynayo bocorka guriga
Pumpkin waa badeecad fiican oo aan fiicnayn oo aan si fiican loo ilaalin karin guriga, iyada oo aan laga badinin qaabkeeda asalka ah iyo maadooyin waxtar leh. Waxaad ku kaydin kartaa bocorka mashiicda mugdiga ah heerkulka + 15 digrii ama qalajin - tani waa hab aad u habaysan oo lagu kaydin karo. Laakiin habka ugu caansan ee bocorka goosashada ee xilliga qaboobaha waa lagu keydiyaa.
Goobidda iyo daryeesha bocorka beninkaz ee beerta
Beninkaz ama caleemaha - wakiil dhalaalaya qoyska bocorka. Inta badan waxaa lagu beeray Indonesia, China, Latin America. Si kastaba ha ahaatee, beninkaz waa warshad cadaalad ah oo aan qabyo ahayn, sidaa daraadeed beeridooda waxaa lagu talin karaa beeralayda cimiladeena. Ma taqaanaa? Khudradda waxaa isticmaala dhakhaatiirta Shiinaha si ay u daweeyaan cuduro badan.
Tafaasiisha iyo sawirada nooca bocorka xaaladaha
Waxa kaliya ee bocorka aan dhicin: midab iyo wareegsan, midab leh dhalaalaya oo cirro leh, caleemo qafiif ah, oo la jarjaray, qaab ah jug iyo serpentine. Noocyada kala duwan ee noocyada kala duwan ee khudraddani waa mid cajiib ah, iyo inuu bannaanka u arko inay adagtahay in la doorto. Sida loo wajaho doorashada ee bocorka, waa maxay noocyada iyo noocyo, waxaan ku sheegi doonaa maqaalkan.
Useful iyo bogsiinta sifooyinka bocorka
Pumpkin waa dalal badan. Waxaa la koray tan iyo wakhtiyadii hore. Warshad badan oo ay jecel yihiin daryeelkooda aan qabyo ahayn iyo goosashada qani ku ah. Isla mar ahaantaana, dhirtu waxay leedahay tiro badan oo ah guryaha daawooyinka. Laga soo bilaabo maqaalka waxaad ku baran doontaa waxyaabaha kiimikada ee midhaha uu ka kooban yahay, baalkiga ayaa bogsiinaya sifooyinka iyo ka hortagga isticmaalka.
Liiska noocyada ugu caansan ee lagenaria (magacyada iyo sawiro)
Maanta waxaan kuu soo bandhigi doonaa Lagenariya. In this article ma akhri karo oo keliya akhbaar xiiso leh oo ku saabsan noocyo of lagenariya, laakiin sidoo kale arki noocyada dhirta qariib ah ee sawirka. Dhirta Lagenaria ayaa iska leh qoysaska Pumpkin, sida caddaynaysa midhaha dhaqanka ee dhaqanka. Waa warshad lidioid ah oo si dabiici ah u koraaya kulaylaha.
Xaaladaha kaydinta ee bocorka ee jiilaalka, sida loo ilaaliyo khudaarta ilaa guga
Maanta waxaa jira tiro badan oo ah nooca bocorka ah, qof walba wuxuu dooran karaa inuu dhadhamiyo mid ka mid ah noocyada koritaanka. Su'aashu waa kaliya oo ku saabsan kaydinta of this midho leh iyo midho caafimaad leh. Muddo intee dhan ah iyo xaaladahee la kaydin karaa, taas oo noocyo kala duwan loogu habboon yahay tan - waxaan ka helaynaa maqaalkani. Noocyo nooca bocorka ah ayaa ugu haboon u keydinta Beerta loo yaqaan "Takhatir" khibrad leh waxay ugu yeeraan kuwa ugu fudud ee ku habboon kaydinta muddada fog ee noocyada bocturada: "Kherson".
Pumpkin waa la ogyahay oo jecel yahay dad badan. Maraqa Pumpkin, digirta, digirta, canjeelada iyo canjeelada - dhamaan sahayda iyo ma aha in ay liisto. Waxaanu kuugu soo bandhigaynaa cuntooyin cajiib ah oo cajiib leh bocorka, oo ah muffiin bocorka ah. Qodobbada waxtarka leh ee bocorka Waxaa la ogyahay in dadka Indiya laga soo bilaabo Koonfurta Ameerika ay bilaabeen inay koraan bocorka 5,000 oo sanno ka hor, qarnigii lixaadna waxaa loo keenay gudaha Boqortooyada Ruushka.
Saliida saliidda ee saliida: waxa ay u fiican tahay iyo waxa ay ku daaweynayso, sida loo isticmaalo iyo loo isticmaalo
Saliingaha Pumpkin wuxuu ka kooban yahay walxo badan oo aan loo baahnayn jidhka bini'aadamka. Waxyaabahaan waxaa laga helaa miraha qudaarta iyadoo la adeegsanayo cadaadis qabow. Iyada oo habab u qalma, badeecada soo baxday waxay haysaa dhammaan fitamiinada iyo macaadiinta ugu qiimaha badan. Natiijada ka soo baxda, dareeraha madow ee madow oo leh dahab dahab ah ayaa la helayaa, wakhtiyadii hore waxaa loo yaqaan "dahab madow".
Waa maxay faa'iido iyo sida loo karsado cabitaanka bocorka ee guriga
Casiirka Pumpkin waa cabitaan caafimaad leh oo lagu ilaalinayo caafimaadka wanaagsan. Waxay ku fiicnaanaysaa jirka oo leh fitamiino, waxay daweysaa cudurrada qaarkood waxayna ka caawisaa in ay sawir ka dhigto qaabka sare. Iyo haddii aad u diyaariso jiilaalka, isku darka tufaaxa, dabacasaha, liinta iyo miro kale - dhibaatooyinka leh difaaca hooseeya maaha mid cabsi badan.
Cunto karinta bocorka: cuntada sida jiilaalka
Haddii aad waydiisatid qof weyn ama ilmo si aad u karisid, waxaad hubaal ka jawaabi doontaa midhaha iyo berry. Laakin ka fikir in compote sidoo kale laga kariyaa khudaarta, iyo ugu habboon iyaga waa bocor. Tijaabi - cabitaankan waxaa lagu darayaa liiskaaga mid ka mid ah kuwa ugu jecel.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Pumpkin 2020